माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण यस्तो रहेछ, बल्ल बाहीरियो वास्तविकता – Sidha Kura
बुद्ध एयरको यस्तो अमानवीय ब्यवहार,-आगोले जलेकी कुँवरलाई ५ घण्टा कुरायो, तर जहाजमा लैजान मानेन
डिभोर्सपछि पश्चाताप गर्दै सामन्था, श्रीमानको नाममा यस्तो ट्याटु !
के तपाईँलाई थाहा छ, पसलमा बिक्री गर्न राखिएको घडीमा सधैँ किन १०ः१० बजेको हुन्छ ?
विहे गरेको ८ वर्ष पुरा भएसंगै राजेश हमालले बच्चा नपाउनुको रहस्य बताए ?
नेपालमा सक्रिय पुरुष ‘वेश्यालय’: बिदेशमा भएकाका श्रीमती र धनाढ्य महिला मुख्य ग्राहक
१५ वर्षीया छात्रालाई बलात्कार गरी फरार रहेका प्रिन्सीपल पाँच वर्षपछि पक्राउ
पीएसजीले जापान भ्रमण गर्ने
रेनु दाहाललाई बहिनी गंगाको बधाई
भारतले मिचेको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो कि होईन ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने ओलीको माग
बर्दिबासका नगरप्रमुखले गरे आफू चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने निर्णय
मुख्य पृष्ठ /हलिवूड/बलिवूड/माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण यस्तो रहेछ, बल्ल बाहीरियो वास्तविकता
माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण यस्तो रहेछ, बल्ल बाहीरियो वास्तविकता
584 1 minute read
एजेन्सी – बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले ऐश्वर्य रायलाई साँचो माया गरेका थिए । तर उनी आफ्नो मायामा सफल हुन सकेनन् । ऐश्वर्यपछि सलमानको जीवनमा कैटरीना कैफले प्रवेश गरिन् । उसो त सलमानको नाम बलिउडमा प्रवेश गर्ने प्राय सबै नयाँ हिरोईनसंग जोडिएकै हुन्छ ।
तर सलमानले ती सबै नाम जोडिएकालाई साँचो माया भने गरेका हुँदैनन् । यसै प्रसंगमा कुरा गर्ने हो भने सलमानले साँचो माया ऐश्वर्यपछि कैट्रिनालाई नै गरेका हुन् । तर केही कारणले गर्दा उनी यो आफ्नो प्रेममा पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । सलमान र कैट्रिनाको जोडीलाई कुनै समय बलिउडमा निकै नै रुचाईन्थ्यो ।
सलमान र कैट्रिनाका फ्यानहरुले त अहिले पनि सलमानले कैट्रिनालाई बिहे गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राखि राखेकै छन् । तर फ्यानहरुको यो चाहाना भने पुरा हुन सकिरहेको छैन । सलमानले कैफको करियरलाई उचाईमा पुर्याउँन निकै मद्दत गरे । उनीहरु एकसाथ ५ वर्ष सम्बन्धमा रहे । तर, मिडिया रिपोर्टका अनुसार सलमानको रिसाहा, पोजेसिव बानीका कारण कैफ दिक्क भएकी थिइन् ।
यसैबीच, ‘राजनीति’ को शुटिङको सिलसिलामा उनले रणवीर कपूरलाई भेटिन् । उक्त समय कपूर दीपिका पादुकोणसँग सम्बन्धमा थिए । तर, कैटरिनासँग सम्बन्ध बढाउन रणवीरले दीपिकालाई धोका दिए । त्यसपछि, कैटरिनाको सम्बन्ध रणवीर कपूरसँग गाँसियो र सलमान खानसँग दुरी बढ्यो । रणवीरसँगको नजिकपनले सलमानसँग टाढिइन् कैटरिना ।
सम्बन्ध सकिएपछि पनि सलमान र कैफ एक अर्कासँग आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएनन् । उनीहरु अहिले पनि एक अर्कालाई सम्मानका साथ भेटघाट गर्ने गर्छन् । कैजाद गुस्तादको फिल्म ‘बुम’ बाट बलिउड प्रवेश गरेकी कैफको पहिलो फिल्म भने ‘मैंने प्यार क्यों किया’ लाई मानिन्छ । उक्त फिल्ममा उनीसँगै देखिएका सलमान खानको जोडी पनि निकै चर्चामा आयो । त्यसपछि उनीहरुले एकसाथ ‘पार्टनर’, ‘युवराज’, ‘एक था टाइगर’ जस्ता फिल्ममा काम गरे ।
यी हुन् निजी विमान भएका बलिउड कलाकारहरू, थाहा पाउनुहोस्
नायिका काजलले प्लास्टिक स र्जरी गरेर स्त’ नको आकार बढाएपछि खिचाएका तस्विर भाइरल
किन काजोल र गोविन्दलाई एकसाथ फिल्ममा देख्न पाइएन ?
विवाह पछि पहिलो पटक सार्वजनिक भए कट्रिना विक्की, हनि-मुनवाट मुम्बई फर्कदा यस्ता देखिए (भिडियो हेर्नुस्)
शिल्पाले खुशी दिन सकिन भन्दै राज शार्लिनकोमा पुग्ने गरेको खुलासा, राज कुन्द्रा ज’ब’र्ज’स्ती चु’म्बन गरे !